मानवअधिकार (लघु कथा) – Chitwan Post
मानवअधिकार (लघु कथा)
अदालतको इजलास श्रोताहरुले खचाखच भरिएको थियो । कोहीकोही एकआपसमा खासखुस गरिरहेका थिए ।
फाँटवाला मुद्दाको मिसिल अघिल्तिर राखेर बसिरहेथ्यो भने पक्ष–विपक्षका वकिल आआफ्नो बहस प्रस्तुत गर्न तयारी गरिरहेका थिए र उनीहरु न्यायमूर्ति अर्थात् न्यायाधीशको आगमन पर्खिरहेका थिए ।
न्यायाधीश बेञ्चमा आसीन भएपछि बहस सुरू भयो ।
सर्वप्रथम, पक्ष अर्थात् वादीतर्फका वकिल आफ्नो पक्षको वकालत गर्दै भन्छन्–‘श्रीमान्, देशमा अहिले सरासर अन्याय भइरहेछ । बिनाप्रमाण कसैमाथि पनि कानुनले समेत दण्ड–सजाय दिन सक्तैन । खेतीपातीको काम गरेर साँझ घर फर्किरहेका मानिसहरु अचानक आएको आँधी र पानीबाट बच्न ओढारमा ओत लागेर बसिरहेको बेला उनीहरुलाई आतंकवादी हुन् भनी शंकाको भरमा गोली हानेर हत्या गर्नु भनेको एकप्रकारको जघन्य अनि अक्षम्य अपराध हो । यो सरासर देशको ऐन कानुनविपरीत मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको समेत उल्लंघन हो । सत्य हो, कसैले पनि कानुन हातमा लिन पाउँदैन । त्यसमा पनि सरकार स्वयंले त्यसो गर्नु त झन् आश्चर्य मान्नुपर्दछ । यहाँ अहिले गुलेलीभन्दा बढी गोली चल्न थालेको छ । सरकारी आदेश, निर्देश र कानुनभन्दा माथि गएर सोझासीधा अझ भनौँ निमुखा गरिबहरुप्रति अमानवीय कारबाही भइरहेछ । म अहिले यो इजलाससमक्ष मेरो वादीको श्रीमान्को जुन किसिमले दमनपूर्ण कारबाहीबाट अन्यायपूर्वक हत्या भएको छ त्यसको न्यायिक छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा सजाय र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई दिनुहुनसमेत आग्रहका साथ निवेदन गर्दछु । श्रीमान्, यही नै मेरो जिकिर हो ।’
वादीपक्षका वकिलले व्यक्त गरेको बहसप्रति जोडदार आपत्ति जनाउँदै प्रतिवादीपक्ष अर्थात् सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल बहस गर्दछन्– ‘श्रीमान्, मेरो सहधर्मी मित्रले भर्खर यहाँ व्यक्त गर्नुभएका कुराहरु सबै सरासर भूmटा र मनगढन्ते हुन् । कपोलकल्पित हुन् । तिनमा रत्ति पनि सत्यता छैन । देशका सबै वर्गका नागरिकहरुको जीउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । सबैलाई थाहा भएकै हो कि अहिले देशमा हत्या र लुटको आतंकले व्यापकता लिइरहेछ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशको सरकार देशमा भइरहेको खुलेआम हत्या र लुटको आतंकलाई मूकदर्शकझैँ हेरेर बस्दैन र बस्नु पनि हुन्न । आफ्नो देशका नागरिकको अनाहकमा बर्बरतापूर्वक हत्या र अपहरण हुन्छ भने त्यस्ता कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई पनि सरकारले कारबाही अवश्य नै गर्छ । श्रीमान्, दिउँसो विद्यालयमा पढाउँदापढाउँदैको शिक्षकलाई स्कुलको कक्षामा नै गएर निर्ममतापूर्वक कुटपिट गर्नु, घिसार्दै बाहिर ल्याएर हातखुट्टा छिनालिदिनु र हत्या गर्नु यो कहाँको न्याय हो ? त्यतिबेला मेरा मित्रले भन्नुभएको मानवअधिकार कहाँ थियो ? कुनरुपमा बसिरहेथ्यो ? हो, देशमा प्रजातन्त्र आएको छ । सबैलाई आआफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तप्रति आस्थावान् हुन अधिकार प्राप्त छ । प्रजातन्त्रको अर्थ यो होइन कि जसले जहाँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइने । अर्को कुरा, यदि सबै एउटै राजनीतिक सिद्धान्तमा लाग्नुपर्ने हो भने प्रजातन्त्र नै किन चाहियो ? बहुदलको के अर्थ ? कुनै नागरिकले देशले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्दछ भने योभन्दा ठूलो अन्याय हुनै सक्तैन । हत्याको राजनीति गरेर देशमा आतंक मच्चाइरहेकाहरुप्रति सरकारले जवाबी कारबाही मात्र गरेको हो । वादीपक्षका मृतक पनि त्यस्तै कारबाहीमा परेका हुन् । शंकाको भरमा सरकारले कसैलाई कारबाही गरेको छैन र सरकारले कहिले पनि मानवअधिकारको उल्लंघन पनि गरेको छैन । अन्त्यमा मेरो आग्रह छ कि श्रीमान्, आफ्नो मानवअधिकारको आवाज उठाउनेले अरुको मानवअधिकारको अवश्य पनि ख्याल गर्नुपर्दछ । रक्षा गर्नुपर्दछ र कदर पनि । अतः म श्रीमान्समक्ष वादीको जाहेरी खारेज गरिदिनुहुन निवेदन गर्दछु ।’
इजलासमा बहस सुन्न उपस्थित हुनेहरुलाई भने त्यहाँ एकप्रकारले रमाइलै भइरहेको थियो । तर्क–वितर्क सुनेर अब के फैसला हुन्छ ? भन्ने उत्सुकता सबैमा थियो । तर, तीमध्ये दुईजना– एक मृतक, कथित आतंकवादीकी पत्नी र अर्की मृतक शिक्षककी पत्नीको अनुहारमा भने पति वियोगको असह्य पीडा अनुहारमा स्पष्ट झल्किरहेको थियो र त्यो पीडा उम्लेर आँसु बनी आँखामा टिलपिलाइरहेको थियो, मानौँ त्यतिखेर इजलासको मुख्य विषय बनिरहेको मानवअधिकार अदालतको फैसलाभन्दा पहिले नै ती दुवै विधवा पत्नीहरुको आँखाबाट आँसुको भेल बनी तल भुइँमा झर्ने तरखर गर्दै थिए ।
गजुरी गाउँपालिका कार्यालयमा चोरी